Nepali Christian Bible Study Resources - २-चार्ली कोल्सन-युद्ध ढोलक बजाउने केटो
» सुसमाचार प्रचार » २-चार्ली कोल्सन-युद्ध ढोलक बजाउने केटो
केहि समयपछि प्रचारकले आफ्नो प्रचार सिद्ध्याए, र तिनले सभासिद्धिएपछि पनि बस्न चाहनेहरूलाई स्वागत छ भने। उक्त निमन्त्रणालाई मैले स्वीकार त गरिनँ, बरू मण्डलीबाट बाहिर निस्कने अवसर पाएकोमा म ज्यादा खुशी थिएँ। त्यहि मनसायले म कुर्सीबाट उठेँ, र जब म ढोकासम्म पुगिसकेको थिएँ, तब कसैले मेरो कोटको एकछेऊ समातेको महसुस गरेँ। फर्केर हेर्दा, मैले एकजना वृद्ध देखिने महिलालाई देखें जसको नाम श्रीमती योङ्ग (Mrs. Young) थियो, जो वाडिङ्गटनकोस चर्चित सेविका थिइन्।
मलाई यसो भन्दै बोलिन, “मलाई क्षमा गर्नुहोस् अपरिचित भाई, तपाईं आर्मीको अधिकृत हुनुहुन्छ जस्तो छ। यो पुरै साँझ मैले तपाईंलाई ख्याल गरिरहेकी थिएँ। यो भवन छोडेर नजानुहोस् भनी म तपाईंलाई विन्ती गर्दछु, किनभने तपाईं पापको कारणले कायल हुनुहुन्छ भनी म सोच्दछु। मलाई विश्वास छ कि तपाईं यहाँ मुक्तिदाताको खोजीमा आउनुभएको छ, र तपाईंले उहाँलाई अझै भेट्टाउनुभएको छैन। फर्कनुहोस्; म तपाईंसँग कुरा गर्न चाहन्छु, र तपाईंको अनुमती भएमा, म तपाईंको निम्ति प्रार्थना गर्दछु।”
“म्याडम,” मैले जवाफ दिएँ, “म एक यहूदी हुँ।”
तिनले जवाफ दिइन्, “तपाईं यहूदी हुनुभएकोमा मलाई वास्ता लाग्दैनँ; येशू ख्रीष्ट यहूदी साथ-साथै अन्यजातिको निम्ति मर्नुभएको हो।”
तिनले बोल्नुभएका शब्दहरूको प्रभावकारी शैली असररहित थिएन। मैले हतारमा छोडेर हिँडेक त्यहि स्थानतर्फ म तिनको पछि-पछि लम्किएँ, र जब हामी त्यहाँ अगाडि आइपुगे पछि तिनले यसो भनिन्, “तपाईंले घुँडा टेक्नु भएमा म तपाईंको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु।”
“म्याडम, त्यो त मैले कहिल्यै नगरेको काम हो, र म कहिल्यै गर्ने पनि छैनँ,” किनभने कट्टर यहूदीहरू वर्षको दुई पटक, अर्थात् तुरहीको चाड र प्रायश्चितको दिनमा बाहेक कहिल्यै पनि घुँडा टेक्ने गर्दैनन्। र ख्रीष्टियनहरूले गरेको जस्तो घुँडा टेक्ने गरिँदैन; हाम्रो तरिकामा भुइँसम्मै मुख टेकाएर घोप्टो परिन्छ।
दयालु तरिकाले मेरो मुखमा हेर्दै श्रीमती योङ्गले भन्नुभयो, “प्रिय अपरिचित भाई, मैले प्रभु येशूमा यस्तो प्यारो, प्रेमिलो, र क्षमाशील मुक्तिदातालाई भेट्टाएको छु जसले आफ्नो खुट्टामा उभिरहेको यहूदीलाई परिवर्तन गर्नसक्नुहुन्छ भनी म दृढ विश्वास गर्दछु, र म मेरो घुँडा टेकेर यस कुराको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु।” तिनले आफ्नो शब्दलाई व्यवहारमा उतारिन, आफ्नो घुँडा टेकिन् , र प्रार्थना गर्न थालिन्। तिनले तिनको मुक्तिदातासँग यस्तो साधारण, बालकले झैं कुरा गरिन् कि यो देखेर म हतोत्साहित भएँ। त्यस्तो प्यारी वृद्ध महिला मचाहिँ उभिरहँदा मेरो सामु आफ्नो घुँडा टेकेर मेरो निम्ति त्यति यत्नपूर्वक प्रार्थना गरेको देखेर म आफैंप्रति लज्जित भएँ। मेरो पूरै विगतको जीवन मेरो हृदयको सामु यसरी बहन थाल्यो कि भुईँ फाट्टिएर म त्यहाँबाट कतै हराउन पाए हुन्थ्यो भनी मैले कामना गरेँ। जब तिनी घुँडाबाट खडा भइन्, एउटी आमाको प्रेमले झैं आफ्नो हात फैलाएर यसो भनिन्: “आज राती सुत्नु अगाडि के तपाईं येशू ख्रीष्टलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ?”
“म्याडम,” मैले जवाफ दिएर भनेँ, “म मेरो परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछु, अब्राहाम, इसहाक, र याकूबका परमेश्वर, तर येशूलाई चाहिँ गर्नेछैनँ।”
“तपाईंलाई आशिष होस्!” तिनले जवाफ दिइन्, “अब्राहाम, इसहाक, र याकूबका तपाईंको परमेश्वरनै मेरो ख्रीष्ट र तपाईंको मसीह हुनुहुन्छ।”
“शुभरात्री म्याडम, र तपाईंको दयाकोनिम्ति धन्यवाद,” भन्दै म मण्डलीबाट निस्किएँ।
घर तर्फ जाँदैगर्दा, मेरो पछिल्ला अनौठो अनुभवहरूलाई सम्झँदै, मै आफैंसँग कुरा गर्न थालेँ: “किन यी ख्रीष्टियनहरूले उनीहरूको निम्ति वास्तवमै यी अपरिचित व्यक्तिहरू, यहूदी र अन्यजातिहरूको निम्ति चासो लिएको? विगत १८०० वर्षदेखि येशूमा विश्वास राख्दै जिउने र मर्ने यी करोडौं पुरुष र स्त्रीहरू गलत हुन र विश्वभरी फैलिएको यी थोरै यहूदीहरू चाहिँ ठीक हुन के सम्भव छ होला र? किन त्यो मृत्युको मुखमा भएको युद्ध ढोलक बजाउने ठिटोले मेरो मुक्ति नपाएको प्राणको बारेमा मात्र सोच्न आनन्दित भएको होला? र, फेरि, किन न्यू योर्कको त्यो ख्रीष्टियन हजामले मप्रति त्यस्तो गहिरो चासो देखाएको होला? किन आज राती त्यस प्रचारकले मलाई औंल्याएको होला, अथवा किन त्यस प्यारी वृद्ध महिलाले ढोकासम्म पछ्याएर मलाई फिर्ता लगेको होला? सायद यो सबै उनीहरूको येशूको निम्ति भएको प्रेमको कारणले हुनुपर्छ, अर्थात् ती येशू जसलाई म साह्रै तुच्छ ठान्दथेँ।”
जती मैले यो सोचेँ उती नै नराम्रो महसुस गरेँ। अर्को पट्टी, मैले विवाद गरेँ: “के मलाई अति प्रेम गर्ने मेरो बुबा र आमाले मलाई त्यस्तो गलत कुरा सिकाउन सक्नुहुन्छ? मेरो बाल्यवस्थामा उहाँहरूले मलाई येशूलाई घृणा गर्न, र त्यहाँ केवल एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, र उहाँको कुनै पुत्र छैन भनी सिकाउनुभएको थियो।” अब मैले मेरो हृदयमा ख्रीष्टियनहरूले अति प्रेम र उपासना गरेका ती येशूसँग आवद्ध हुने इच्छा पलाउँदै गरेको महसुस गरेँ। म छिटो-छिटो हिँड्न थालेँ, र यदि साँच्चै येशू ख्रीष्टको धर्ममा केहि सत्यता रहेछ भने म सुत्नुभन्दा अगाडि यसको बारेमा केहि थाह गर्नेछु भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा निर्धारण गरेको थिएँ।”
जब म घर आइपुगेँ, मेरो श्रीमतीले (जो कठोर वा कट्टर यहूदी थिइन्) मलाई अलि उत्साहित देखेकी हुनाले म कहाँबाट आउँदैछु भनी प्रश्न गरिन्। उसलाई सत्य कुरा बताउने मैले हिम्मत गरिनँ, र झूट म बोल्न सक्दिन थिएँ। त्यसैले मैले भनेँ, “श्रीमती, कृपया मलाई केहि प्रश्न नगर। मैले एकदम महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने छ। म मेरो व्यक्तिगत अध्ययन कोठमा गएर एक्लै रहन चाहन्छु।”
म झट्टै मेरो अध्ययन कोठामा छिरेँ, ढोकामा चुकुल लगाएँ, सदाझैं उभिएरै पूर्व तर्फ आफ्नो मुख फर्काएर प्रार्थना गर्न थालेँ। मैले जति धेरै प्रार्थना गरेँ, उती नै मलाई खराब महसुस भयो। मभित्र आएको भावनाको व्याख्या गर्न सक्दिनँ। मैले बेस्सरी चासो भएका पुराना नियमहरूका भविष्यवाणीहरूका अर्थको सवालमा म ठूलो दोधारमा परेँ। मेरो प्रार्थनाले मलाई केहि सन्तुष्टता दिएन, र त्यसपछि ख्रीष्टियनहरूले प्रार्थना गर्दा घुँडा टेक्छन् भन्ने कुरा मेरो दिमागमा आयो। त्यसमा केहि विशेष छ कि? एउटा कट्टर यहूदीको रूपमा हुर्किएको हुनाले, प्रार्थना गर्दा कहिल्यै पनि घुँडा नटेक्न मलाई सिकाइएको थियो। ती येशू जो धूर्त हुन् भनी म विश्वास गर्दथेँ, तिनको सामु आफ्नो घुँडा टेक्दा मैले धोका खाएको जस्तो हुने हो कि भन्ने ममा डर उत्पन्न भयो।
रातको समय साह्रै चिसो भए तापनि, मेरो अध्ययन कोठामा आगो बालिएको थिएन (मैले उक्त रात त्यो कोठा प्रयोग गर्नेछैन होला भनी सोचिएको थियो), तरैपनि त्यस रातमा जस्तो मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि पसिना आएको थिएन। त्यस कोठाको भित्तामा फिल्याक्टरीहरू (Phylacteries_सानो कागजमा पदहरू लेखेर राखिने एक प्रकारको साधन जसलाई यहूदीहरूले आफ्नो शिरमा वा पाखुरामा बेर्ने गर्दथे) झुण्डिएको मैले देखेँ। म तेह्र वर्षको हुँदादेखि विश्रामदिनहरू र चाडहरूमा बाहेक मैले त्यो नलगाएको कुनै दिन थिएन। मैले त्यो सामानलाई अति प्रेम गर्दथेँ। मैले त्यो सामानलाई हातमा लिएँ, र त्यसलाई हेर्दा मेरो हृदयमा उत्पत्ति ४९:१० सम्झना भयो, “शिलो नआउन्जेल यहूदाबाट न राजदण्ड हट्नेछ, न ता उसको वंशबाट व्यवस्था दिनेवाला हट्नेछ; अनि जाति-जातिका मानिसहरूको आज्ञापालन उहाँलाई हुनेछ।”
मेरो हृदयमा खेलेको र मैले प्राय: जसो पढ्ने र विचार गर्ने गरेको दुईओटा अर्को खण्डहरूमध्ये पहिलो मिका ५:२ हो, “तर तँचाहिँ, हे बेतलेहेम एफ्राता, तँ यहूदाका हजारौंको बीचमा सानो छस्; ता पनि तँबाट मेरा निम्ति एकजना निस्केर आउनेछन्, जो इस्राएलका शासक हुनेछन्, जसका उद्गमहरू ता प्राचीनकालदेखि, अँ, अनन्तकालदेखि नै हुन्।”
अर्को खण्डचाहिँ यशैया ७:१४ हो, “यसकारण प्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ—हेर, एउटी कन्या गर्भवती हुनेछिन्, र तिनले एउटा छोरा जन्माउनेछिन्, र उसको नाम इम्मानुएल राख्नेछिन्।”
यी तीनओटा खण्डहरूले मेरो हृदयमा यति शक्तिशाली छाप पार्यो कि मैले यसरी कराएँ, “हे अब्राहाम, इसहाक र याकूबका परमप्रभु, यो कुरामा म गम्भिर छु भनी तपाईं जान्नुहुन्छ। यदि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, यस रात मलाई उहाँ प्रकट गरिदिनुहोस्, र म उहाँलाई मेरो मसीहको रूपमा स्वीकार गर्नेछु।” मैले यो भनिनसिद्ध्याउँदै मैले लगभग बिनाहोसमा मेरो फिल्याक्टरीहरू कोठाको एउटा कुनामा फ्याँकिदिएँ, र निकै छिटो म मेरो घुँडामा थिएँ र त्यहि कुनाको मेरो फिल्याक्टरीहरू छेऊमा म आफ्नो घुँडामा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। फिल्याक्टरीलाई मैले गरेको झैं फ्याँक्नुचाहिँ कुनै यहूदीको निम्ति निन्दाजनक कार्य थियो। म अब जीवनमा पहिलो चोटि मेरा घुँडाहरूमा प्रार्थना गर्दै थिएँ, र मैले गरेको प्रकृयाप्रति मेरो हृदयमा खलबली र शंका थियो।
त्यसबेलाको मेरो अनुभवलाई मैले सबैभन्दा सुरुमा रचेको पहिलो भजनमा सर्वोत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसलाई मैले त्यस प्रचारकप्रति समर्पण गरेको छु जसले मलाई यति सारो असर पार्नुभएको थियो।
LEAVE ME NOT ALONE: THE PRAYER OF A
Dedicated to my Dear Friend, E. Payson Hammond
My life is filled with sad regrets;
No peace attends my way;
Each day the sun in darkness sets,
Oh, hear me Lord, I pray:
Oh, let me not in darkness rove,
But melt my heart of stone;
Accept my faint attempts at love,
And fix my heart on things above.
Oh leave me not alone.
Indulgent God of love and power,
To Thee for help I fly;
Be with me at this solemn hour,
And hear my contrite sigh;
Renew my heart and be my Guide
To Thy celestial throne:
Oh, let me see Thy wounded side;
I come to Thee, the crucified Lord,
Condescend to be my Guide,
Oh, leave me not alone.
I feel this load of sin;
Far from the shadow of Thy wings,
All darkness is within.
Now, take me, Lord, into Thy care,
And melt my heart of stone;
My load is more than I can bear,
And Thou didst not disdain to hear
The publican in fervent prayer,
I know Thou canst not let me go--
Thy blood for me was shed;
Now let me sink beneath its flow,
And raise me from the dead,
And bid me stretch my withered arm
To Thee whose love is shown,
And grasp Thy mantle with its charm
To take from Death its dread alarm,
And then, reclining on Thine arm,
येशूलाई गरेको मेरो पहिलो प्रार्थना म कहिल्यै बिर्सनेछैनँ। यो यस्तो थियो: “हे प्रभु येशू ख्रीष्ट, यदि तपाईं परमश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने; यदि तपाईं संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने; यदि तपाईं हामी यहूदीहरूले अझै पनि पर्खिरहेको मसीह हुनुहुन्छ भने, र यदि ख्रीष्टियनहरूले भनेझैं तपाईंले पापीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंले मलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म एउटा पापी हुँ, र म मेरो जीवनको बाँकी सबै दिनहरूमा तपाईंको सेवा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नेछु।”
मेरो यो प्रार्थना, यद्यपि, मेरो शिरभन्दा धेरै माथि गएन। कारण पत्ता लगाउन धेरै घोरिनुपर्दैन। किनभने उहाँले मैले उहाँबाट मागेको कुरा गरिदिनुभएको खण्डमा, मेरो तर्फबाट उहाँलाई प्रतिज्ञा गरेबमोजिम गर्नेछु भनी येशूसँग मैले मोलतोल गर्न खोजिरहेको थिएँ। म मेरो घुँडामा झण्डै आधा घण्टासम्म बसिरहेँ, र त्यसबेला मेरो मुहारबाट पसिनाहरू तल बगिरहेका थिए। मेरो शिर पनि तातो भएको महसुस भयो, र मैले मेरो शिरलाई चिसो पार्न कोठाको भित्तामा टँस्साएर राखेँ। म पीडामा थिएँ, तर मेरो परिवर्तन भएको थिएन। म उठेँ र कोठाको यता र उता हिँड्न थालेँ। त्यसपछि म धेरै नै टाढा पुगेछु कि जस्तो भावना ममा आयो, र मैले फेरी कहिल्यै घुँडा नटेक्ने प्रतिज्ञा गरेँ। मैले आफैंसँग तर्क गर्न थालेँ, “मैले किनँ घुँडा टेक्नु? येशूले अन्यजातिहरूको निम्ति गर्नुहुन्छ भनी भनिएको काम के अब्राहामका परमेश्वरले मेरो निम्ति गर्न सक्नुहुन्न र जसको प्रेम, सेवा र उपासना म गर्दछु?” मैले निश्चय नै यहूदीको नजरबाट हेरिरहेको थिएँ र मैले अझै पनि तर्क गरेँ, “म किन पुत्रकहाँ जानु र? के पिता पुत्रभन्दा ठूला होइनन् र?”
जति मैले तर्क गर्दथेँ, त्यति नै खराब महसुस गर्दथेँ, र झन् बेसी दुविधामा पर्दथेँ। कोठाको एउटा कुनामा मेरो फिल्याक्टरी थियो, जसको अझै पनि ममा चुम्बकीय प्रभाव थियो। म भित्रैबाट भावुक भएर ती प्रति फर्किएँ, र शक्तिहिन हुँदै मेरो घुँडाहरू टेकेँ, तर केहि शब्द पनि उच्चारण गर्न सकिनँ। मेरो हृदय दुखेर आयो, किनभने यदि ख्रीष्ट मसीह हुनुहुन्छ भने ममा उहाँसँग परिचित हुने निष्कपट इच्छा थियो। मैले दश बज्न पन्ध्र मिनटदेखि बिहानको दुई बजेर पाँच मिनट सम्म समय-समयमा आफ्नो आसन परिवर्तन गरिरहेँ र यता र उता हिँडिरहेँ। त्यस समयमा मेरो हृदयमा प्रकाश आउनथाल्यो, र मैले मेरो हृदयमा येशू ख्रीष्ट वास्तवमै साँचो मसीह हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास र विचार गर्न थालेँ। मैले यो महसुस गर्ने बित्तिकै त्यस रातको निम्त अन्तिम पटक म मेरो घुँडाहरूमा बसेँ; तर यो समयमा मेरा शंकाहरू टाढा भइसकेका थिए, र मैले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै थाह नगरेको र मेरो हृदयभित्र आएको आनन्द र खुशीको निम्ति परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थालेँ। मैले साँचो शिलो, इस्राएलको शासक, इम्मानुएल—“परमेश्वर हामीसँग” भनिने व्यक्तिलाई भेट्टाएको छु—मैले साँचो मसीह—येशूको बारेमा यशैयाको विवरणलाई विश्वास गरेँ, जो “मानिसहरूद्वारा .. तुच्छ ठानिएको र त्यागिएको छ — शोकहरूको मानिस, र दु:खसँग परिचित” हुनुहुन्थ्यो। र जो “हाम्रै अपराधहरूका निम्ति घायल भएको थियो; उसलाई हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोटैचोट परेको थियो; हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो; र उसका कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निकौ भयौं।” (यशैया ५३:५)। मैले उहाँलाई हेरेको थिएँ जसलाई तिनीहरूले घोचेका थिए, र मेरो परिवर्तन भएको छ भनी मैले जानेँ, ख्रीष्टको खातिर परमेश्वरले मेरो पाप क्षमा गर्नुभयो। मैले अब बुझेँ कि ख्रीष्ट येशूमा न खतना, न बिनाखतना केही कामको छ, तर नयाँ सृष्टि।
म मेरा घुँडाहरूबाट उठेँ र, मैले भेट्टाएको नयाँ खुशीमा मैले सोचेँ कि मैले मेरी श्रीमतीलाई ममा आएको ठूलो परिवर्तनको बारेमा बताउँदा तिनी झट्टै मेरो आनन्दमा सहभागी हुनेछिन्। मेरो हृदयमा त्यो बिचार राख्दै, म मेरो अध्ययन कोठाबाट सुत्ने कोठातर्फ कुदेँ। तिनलाई अङ्गालो हालेर चुम्बन गर्दै भनेँ, “श्रीमती, मैले मसीहलाई भेट्टाएँ।” तिनी चिढिएको जस्तै देखिइन्, मलाई आफूबाट पर धकाल्दै, रूखोपनले प्रश्न गरिन्, “कसलाई भेट्टाएँ?” मेरो जवाफ थियो, “मेरो मसीह र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टलाई।” तिनले केहि बोलिनन्, तर पन्ध्र मिनटभन्दा कम समयमा तिनले लुगा लगाइन् अनि बिहानको २ मात्र बजेको र निकै चिसो भएकैबेला घर छोडेर गइन्, र सडक पारी बस्ने गरेका तिनकी आमा-बाबुको घरमा पसिन्। मैले तिनको पिछा गरिनँ, तर मेरो श्रीमतीको पनि मेरो झैं आँखा खोलियोस् भनी मैले नयाँ गरी भेट्टाएको मेरो मुक्तिदाताको सामु घुँडा टेकेँ, र त्यसपछि म सुतेँ। बिहान मेरो श्रीमतीलाई तिनकी बुबा-आमाले भनेछन् कि यदि उसले मलाई “श्रीमान्” भनी बोलाएमा उसलाई उसको अधिकारबाट वञ्चित गरिनेछ, सभाघरबाट निकालिनेछ र श्रापित तुल्याइनेछ। त्यहि समयमा मेरा दुई सन्तानहरूलाई उनीहरूले मलाई फेरी “बुबा” भन्नु हुँदैन; र “धूर्त”येशूको उपासना गर्दाहुँदि म आफैं ऊजस्तै खराब भएको छु भनी तिनीहरूका हजुरबुबा-आमाद्वारा भनि पठाइयो।
ओहो! परमेश्वरको सुसमाचारप्रति मानिसको हृदय कति घृणात्मक छ। रोमीको पुस्तकका एकजना जीवन परिवर्तन भएको हिब्रूहरूको पनि हिब्रू लेखकले यसो भनी ठीक कुराको घोषणा गरेका छन्, “यहूदी र ग्रीकहरू दुवैलाई ‘यिनीहरू सबै पापका वशमा छन्’ भनी दोष लगाइसकेका छौं; जस्तो लेखिएको छ: धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन... किनकि सबैले पाप गरेका छन्, र परमेश्वरको महिमारहित हुनगएका छन्” (रोमी ३:९०१०, २३)।
मेरो मुक्तिको पाँच दिनपछि मैले वासिङ्गटनको चिकित्सक-अधिकृतबाट सरकारी कामको निम्ति पश्चिमतर्फ जाने आदेश पाएँ। मैले आफ्नी श्रीमतीसँग कुरा गर्न र ऊसँग बिदाइ माग्न मेरो शक्तिले भ्याएसम्म हर तरिकाले कोशिश गरेँ, तर तिनले न मलाई भेटिन् न ता केहि लेखिन्। यद्यपि तिनले एकजना छिमेकीद्वारा खबर पठाइन् कि मैले येशू ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाता भनी भनुन्जेल मैले तिनलाई मेरो श्रीमती भनी बोलाउन पाउँदिनँ, किनभने तिनले मसँग बस्न चाहन्नथिइन्। आफ्नो श्रीमतीबाट यस्तो खबर पाउने आपेक्षा मैले गरेको थिइनँ, किनभने मैले तिनलाई र मेरा प्रिय नानीहरूलाई प्रेम गर्दथेँ। त्यसैले दु:खित हृदय लिएर म त्यस बिहान आफ्नो कामको निम्ति करिब २१०० किलोमिटर यात्रा गर्न आफ्नो श्रीमती र नानीहरूको अनुहार पनि हेर्न नपाइ घरबाट निस्किएँ।
चौवन्न दिनसम्म मेरी श्रीमतीले मैले हरेक दिन एउटा पत्र लेखे तापनि मेरो कुनै पनि पत्रको जवाफ लेखिनन्। र हरेक पत्र पठाउँदा परमेश्वरले कम्तिमा एउटा मात्र भए पनि पत्र पढ्न उसको हृदय नम्र बनाउनुभएको होस् भनी प्रार्थना गरेँ। यदि उसले केवल एउटैमात्र पत्र पढिदिए पनि (किनभने हरेक पत्रमा ख्रीष्ट प्रचार गरिएको थियो र मैले मेरो हृदयमा महसुस गरेको आनन्दको बारेमा बताइएको थियो), मैले घर छोड्नुभन्दा अगाडि तिनले भनेको र गरेको कुरामा पुनर्विचार गर्नेछिन् भनी मैले बिचार गरेँ। मेरो अनुभवमा कौपरको शब्दहरू यसरी पहिले कहिल्यै पनि पूरा भएका थिएनन्:
“God moves inamysterious way His wonders to perform; He plants His footsteps in the sea, And rides upon the storm”
किनभने मेरो छोरीको अनाज्ञाकारिताले मेरो श्रीमतीले मुक्ति पाएकी हुन्। मेरो छोरी मेरो नानीहरूमध्येको सानी चाहिँ हो, र उसलाई उनको बाबुको प्यारी भनिन्थ्यो। ख्रीष्टतर्फको मेरो परिवर्तन पछि, एकातिर आमाप्रतिको उसको जिम्मेवारी र अर्कोतिर बुबाप्रतिको उसको प्रेमले उसको हृदयलाई व्याकुल बनाएको थियो।
त्रिपन्नौँ रातमा उसले सपनामा उसको बुबाको मृत्यु भएको देखिछन्। उसमा डर उत्पन्न भयो, र जे सुकै व्यहोर्नु परे तापनि, उसले अब आउने चिट्ठी नाश हुन नदिने अठोट गरिन्। अर्को बिहान उसले ढोकामा हुलाकीको प्रतिक्षा गरिन्। जब तिनले उसलाई चिट्ठी हातमा थमाए, उसले बुबाको चिट्ठी झट्टै आफ्नो पाखुरामा लुकाइन्, उसको कोठामा कुदेर गइन्, ढोकामा ताल्चा लगाइन् र तीनचोटी सम्म दोहोर्याएर पढेर मात्र रोकिइन्। उक्त चिट्ठीले उसको हृदयलाई यति सम्म दु:खित बनाएछ कि जब ऊ तल गइन् उसको आमाले ऊ रोइरहेकी देखिछन्, र उसको दु:खको कारण सोधिछन्।
“आमा, यदि मैले तपाईंलाई बताएँ भने, तपाईंले ठेस खानुहुनेछ; तर यदि तपाईं शोकित नहुने प्रतिज्ञा गर्नुहुनेछ भने, म तपाईंलाई बताउनेछु।”
“के हो र, मेरी छोरी?” उसको आमाले सोधिन्।
उसको लुगाबाट मेरो पत्र निकाल्दै, उसले आमालाई गएरातीको सपनाको बारेमा बताइन्, र भनिन्, “मैले आज बिहान मेरो बुबाको पत्र खोलेको छु, र अब मेरो बुबा खराब मानिस हुनुहुन्छ भनी मेरो हजुरबुबा र हजुरआमा वा कसैले पनि भनेको कुरालाई म विश्वास गर्नेछैन, किनभने खराब मानिसले आफ्नो श्रीमती र नानीहरूलाई यस्तो पत्र लेख्न सक्दैन। आमा, म विन्ती गर्दछु, यो पढ्नुहोस्” भन्दै त्यो पत्र आफ्नी आमालाई थमाइन्।
मेरो श्रीमतीले त्यो पत्र लिएर अर्को कोठामा गइन्, र तिनको टेबलको घर्रामा ताल्चा मारेर राखिन्। त्यस साँझ तिनले आफ्नो कोठामा ताल्चा लगाइन् र टेबलको घर्रा खोलेर मेरो पत्र लिइन् र पढ्न थालिन्। जति तिनले त्यो पढिन्, त्यति नै तिनले खराब महसुस गरिन्। पछि तिनले मलाई बताइन् कि त्यो पत्र तिनले पाँचचोटि पढेर मात्र राखेकि रहिछन्। अन्तिम पटक पढेपछि मेरी श्रीमतीले उक्त चिट्ठी टेबलमा फिर्ता राखिन् र अर्को कोठामा फर्केर गइन्। तिनको आँखा आँशुले भरिएको थियो, र अब सोध्ने पालो मेरी छोरीको थियो, “आमा, तपाईं किन रुँदैहुनुहुन्छ?” “छोरी, मेरो हृदय दु:खिरहेको छ”, तिनको जवाफ यस्तो थियो; “म एकछिन विश्राम कक्षमा सुत्न चाहन्छु”। तिनले त्यसै गरिन्। कमाराले तिनको हृदयको दु:खाइ हटाउनलाई चिया भए पुग्छ भनी सोचेर तिनको निम्ति चिया पकाएर दियो। एक कप चियाले सम्भावत: काम गर्न सक्ने त्यस्तो धेरै कुराहरू हुन सक्छ, तर यसले मेरो बिचरी श्रीमतीलाई केहि सान्त्वना दिएन।
केहि समयपछि मेरो श्रीमतीको आमा हाम्रो घरमा आउनुभएछ, मेरी श्रीमती निकै बिरामी भइछन् भनी सोचेर, एउटी आमाले प्राय: गर्ने जस्ता धेरै घरेलु उपायहरू प्रयोग गर्नुभएछ। यसले पनि निको पार्न सकेनछ। साँझको साँढे सात बजेपछि मेरी सासु-आमाले डा. डि— लाई बलाउनुभएछ। उनी झट्टै आएछन् र केहि औषधिहरू खाने सल्लाह दिएछन्, तर उनको औषधिले पनि मेरी श्रीमतीको हृदयको दु:खाइलाई कम गर्न सकेनछ। त्यस रात मेरी श्रीमतीको हेरचाह गर्न मेरी सासु-आमा रातको सवा एघार बजेसम्म हाम्रै घरमा बस्नुभएछ। पछि मेरी श्रीमतीले मलाई बताए अनुसार त्यस रात तिनको आमा त्यहाँबाट गइदिनुभए हुन्थ्यो भनी तिनले इच्छा व्यक्त गरिछन्, किनभने आमा जानुभए बित्तिकै मैले पहिले गरेझैँ घुँडा टेक्न तिनले पूरा हृदय बनाइसकेकि रहिछन्। नभन्दै, सासु-आमाले घर छाडेर त्यहाँबाट जानबित्तिकै, मेरी श्रीमतीले ढोका बन्द गरिछन् र आफ्नो खाटको छेऊमा घुँडा टेकिछन्, र दुई मिनटभन्दा पनि कम समयमा नै ख्रीष्ट, अर्थात ती महान् चङ्गाइकर्ताले तिनलाई भेट्नुभयो, निको पार्नुभयो र मुक्ति दिनुभयो।
तिनको श्रीमानले झैँ, त्यस घडी तिनी मानवीय प्रयत्न, सांसारिक बुद्धि र व्यर्थको रीतिरिवाजको अन्त्यमा आइपुगिन्, अनि आफैंलाई र प्राण, आत्मा र शरीरलाई परमेश्वरकहाँ सुम्पिइन्। पवित्र आत्मा तिनको अन्धो आँखाहरू खोल्न, तिनलाई अन्धकारबाट ज्योतिमा फर्काउन, र शैतानबाट परमेश्वरकहाँ ल्याउन (प्रेरित २६:२८) तयार रहनुभएको तिनले भेट्टाइन्। तिनले “परमेश्वरका थुमालाई, जसले संसारको पाप उठाई लैजानुहुन्छ” हेर्न सकिन्, तिनले पुरानो समयको फिलिपसँगै भन्न सक्थिन्, “हामीले उहाँलाई भेट्टाएका छौं, जसको विषयमा मोशाले व्यवस्थामा लेखे, र भविष्यवक्ताहरूले लेखे, अर्थात् यूसुफका पुत्र, नासरतका येशूलाई” र नथनएलसँगै भन्न सक्थिन्, “रब्बी, तपाईं परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ! तपाईं इस्राएलका राजा हुनुहुन्छ!” (यूहन्ना १:२९, ४५, ४९)।
अर्को बिहान मैले यस्तो लेखिएको एउटा पत्र पाएँ, “प्रिय श्रीमान्, --एकचोटि घर आउनुहोस्। तपाईं गलत हुनुहुन्छ र म ठीक छु भनी मैले सोचेँ, तर तपाईं ठीक हुनुहुन्छ र मचाहिँ गलत रहेछु भनी मैले थाह पाएको छु। तपाईंको ख्रीष्ट नै मेरो मसीह हुनुहुन्छ—तपाईंको येशू, मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अघिल्लो रात, एघार बजेर १९ मिनट बित्दा, म मेरो जीवनमा पहिलो पटक मेरा घुँडाहरू टेकिरहेको थिएँ, र प्रभु येशूले मेरो आत्मा बचाउनुभयो।”
उक्त पत्र पढेपछि एकछिनको निम्ति त मैले सेवा गरेको सरकारको कुनै पनि फिक्री छैन जस्तो महसुस गरेँ। मेरो कामलाई अपूरो छोड्दै द्रुत गतिले चल्ने पहिलो रेल चढेँ, र वासिङ्ग्टन जानको निम्ति हिँडेँ। त्यसबेला मेरो घर विशेषगरी यहूदीहरूको माझमा राम्रो परिचित भएको हुनाले (किनभने म प्राय: जसो सभाघरमा गाउने काम गर्दथेँ), हलचल मच्च्याउन चाहिनँ, र त्यसैले मेरो श्रीमतीलाई मलाई स्टेशनमा नभेट्न पत्र लेखेँ। वासिङ्ग्टन पुगेर आफ्नो सामानहरू लिएर म चुपचापसँग घर पुगेँ। जब म मेरो घरको अगाडि पुगेँ, मेरी श्रीमती ढोकामा उभ्भिएर मेरो बाटो हेरिरहेको भेट्टाएँ। तिनको अनुहार खुसीले उज्यालो भएको थियो। म गाडीबाट बाहिर निस्कनसाथ तिनी कुदेर मलाई भेट्न आइन् र मलाई अङ्गालो हालेर चुम्बन गरिन्। घरको सडकपारीबाट तिनको बुबा-आमा पनि खुला ढोकामा उभिरहेका थिए, र जब तिनीहरूले हामीलाई एक-अर्काको अङ्गालोमा देखे, तब तिनीहरूले म र मेरो श्रीमती दुवैलाई सराप्न थाले। मेरी श्रीमतीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरेको दश दिनपछि, मेरी छोरीले पनि मुक्ति पाइन्। ऊ अहिले एक ख्रीष्टियनको श्रीमती भएकीछिन्, र तिनको श्रीमानसँगै फसलको खेतमा काम गर्ने सहकर्मी हुन्। मेरो छोराले (उसको बारेमा मैले छोरीको जस्तै वयान दिन पाएको भए हुन्थ्यो भनी म परमेश्वरसँग विन्ति गर्दछु) आमापट्टीको उसको हजुरबुबा र हजुरआमाबाट प्रतिज्ञा पाएको थियो कि उसले मलाई “बुबा” र उसको आमालाई “आमा” भनी कहिल्यै नबोलाएको खण्डमा, उनीहरूले उसलाई आफ्नो सबै सम्पत्ति छोड्दिनुहुनेछ। र अहिलेसम्म पनि ऊ आफ्नो प्रतिज्ञामा खडा रहेकोछ।
« १-चार्ली कोल्सन-युद्ध ढोलक बजाउने केटो
३-चार्ली कोल्सन-युद्ध ढोलक बजाउने केटो »